Iyo nyowani vhezheni yeKrita 4.20 yemufananidzo mupepeti inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeKrita 4.20 yemufananidzo mupepeti iri pano uye idzi ndidzo nhau dzayo
Ya iyo nyowani vhezheni yemufananidzo mupepeti yakaburitswa muchinjikwa-chikuva uye yakavhurwa sosi choko, iyo ichangosvika vhezheni 4.20 iyo yatinowana nayo nyowani dzakakosha shanduko uye zvakare akati wandei madhigi kugadzirisa kune izvi suite.
Kana iwe usati uchiziva nezve Krita, iwe unofanirwa kuziva izvo ichi chinyorwa chakakurumbira chemufananidzo chakagadzirwa sedhijitari yekudhirowa uye fananidzo suite, iyo yakavakirwa pane KDE chikuva maraibhurari uye inosanganisirwa muCalligra Suite.
Iyo yekushandisa interface inonzwisisika uye kuwedzera kune izvo kune avo vanoziva Photoshop izvi zvichave zvakajairika.
1 Main nyowani maficha eKrita 4.20
1.1 Maitiro ekuisa Kirta 4.20 paLinux?
1.2 Kuisirwa kubva kuAppImage
1.3 Kuisirwa kubva kuFlatpak
Main nyowani maficha eKrita 4.20
Mune ino vhezheni nyowani yeKrita 4.20, vagadziri vakashanda kutipa ipaneru rakagadziridzwa rekushanda pamwe ne (Ruvara Palette Docker) palette.
Kuwedzera kune dhizaini dhizaini shanduko kubva kune multiline kuenda patafura yechero nhamba yemitsara nemakoramu. Ruvara rwekunyepedzera mukukweva-uye-kudonhedza modhi yakadzikama uye kamwe-kubaya kuwedzera kwemarekodhi kwakareruka
Uyewo Iko kugona kwekusiya zvinhu zvisina chinhu kwakawedzerwa kuwedzera kuoneka kwemabhuroko. Iko mukana wekuisa pallet muKRA faira.
Chimwe chiitiko ndeche kusvika kweAPI yekugadzirisa mifananidzo kubva muzvinyorwa muPython, iyo inokutendera iwe kuti ugadzire ako wega plugins anoshanda neanoratidzira.
Mashandiro akadai sekuchinja kune imwe furemu, kumisikidza mwero wefuremu, uye kutanga uye kupedzisa kutamba kunotsigirwa.
Zvichienderana neiyo API yakatsanangurwa, akati wandei plugins akatogadzirirwa, semuenzaniso Animator Vhidhiyo Referensi kuti ubvise mafiremu asina hunhu kubva muvhidhiyo uye Sprite Sheet Manager kuburitsa kune sprite tafura.
Kune rumwe rutivi brashi yekuita inowedzerwa nekuda kwevectorization pane iyo GPU uye nekusunungura kodhi kubva kukiyi.
Kugadzira pixel dhata, isina-kuvharira hash matafura (asiri-anovharira hashmap) anoshandiswa, ayo akabvumidza kuwedzera zvakanyanya kumhanya kwemazhinji-akapetwa data kugadzirisa mune akawanda-epakati masisitimu.
Iko kushandiswa kwevector mirairo kunoitwa kweGaussian uye yakapfava mabrashi uye inoderedza mutoro paCPU.
Maitiro ekuisa Kirta 4.20 paLinux?
Kana iwe uchida kuisa iyo nyowani vhezheni yeiyi suite uye iwe uri mushandisi weUbuntu kana kubva kwairi.
Iwe unogona kuisa iyo application nekuwedzera repository kune yako system, Kune izvi isu tichazoda kushandiswa kweteminari, tinozviita nekutaipa ctrl + alt + t panguva imwe chete, ikozvino isu tinongofanirwa kuwedzera mitsara inotevera:
Ipapo isu tinoenderera mberi nekuvandudza yedu runyorwa rwezvinyorwa:
Uye pakupedzisira isu tinoenderera nekuisa kukwidza pakombuta yedu:
Kana iwe uchitova neiyo repository, chinhu chega iwe chaunofanirwa kuita kusimudzira:
Zvino, kune avo vari vashandisi veArch Linux uye yakatorwa kubva pane izvi, ivo vanozokwanisa kuisa iko kunyorera zvakananga kubva kuhurongwa hwekuchengetedza. Chete ivo vanofanirwa kuvhura terminal uye mairi mhando:
Panguva yeiyo nyaya yeavo vari Vashandisi veGentoo vanofanirwa kumhanya uyu murau mune terminal:
Kuisirwa kubva kuAppImage
Kune zvimwe zvekugovera pamwe nezveavo vasingade kuzadza yavo repostory system, isu zvakare tine sarudzo yekumisikidza iyo application kubva pamufananidzo, chinhu chega chatinofanira kurodha pasi rinotevera faira uye nekupa mvumo yekuuraya kuti tikwanise kuiisa.
Uye neizvozvo isu tine Krita yakaiswa mune yedu system.
Kuisirwa kubva kuFlatpak
Pakupedzisira imwe nzira yakajairika yeinenge chero yazvino Linux yekuparadzira iri nerubatsiro rweFlatpak mapakeji. Izvo chete zvinodiwa kuti ushandise iyi nzira ndeyekuti kugovera kwako kune rutsigiro rweFlatpak uye iwedzerwe.
Kuisa Krita, iwe unongofanirwa kuvhura terminal uye kumhanya unotevera kuraira:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeKrita 4.20 yemufananidzo mupepeti iri pano uye idzi ndidzo nhau dzayo
Kuratidzira kwekupihwa kwedomeini .amazon
GParted inosvika vhezheni 1.0 ... makore gumi nemashanu gare gare!